आलोपालो आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयले बाम गठबन्धनमा विवाद – नेपाली सूर्य
December 30, 2017 December 30, 2017 Nepali SuryaLeaveaComment on आलोपालो आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयले बाम गठबन्धनमा विवाद
आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयलाई लिएर बाम गठबन्धनमा विवाद,आलोपालो गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति नभएको एमालेको दावी ।
नेपाली राजनीतिमा दलीय सहमति सामान्य मान्नु पर्छ । हरेक राजनीतिक घटनाक्रमलाई व्यवस्थापन गर्न दलबीच सहमति हुन्छ । तर, दल र तीनका नेता, सहमति कार्यान्वयनमा भने विल्कुल इमान्दार छैनन् । त्यसैले बेला–बेला दलबीच तिक्तता पैदा हुने गरेको छ । बाम गठबन्धन यतिखेर त्यस्तै मोडमा छ । आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने सवालमा आलोपालो गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनभित्र विवाद सुरु भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमाले–माओवादी एकताको अनपेक्षित प्रसंगले स्थान पायो । पछि, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धन नै बन्यो । पार्टी एकता गर्ने लक्ष सहित बनेको चुनावी गठबन्धले अपेक्षाकृत सफलता हासिल ग¥यो । अब, एमाले–माओवादी गठबन्धनले बहुमतीय आधारमा सरकार गठन गर्नेछन् । तर, बाम गठबन्धनमा यतिखेर आलोपालो आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सवाल विवादको विषय बनेको छ ।
माओवादी नेताहरु गठबन्धन बनाउने क्रममा आगामी सरकारको नेतृत्व आलोपालोका आधारमा गर्ने सहमति भएको दावी गर्छन । तर, आलोपालोको आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भयो भन्ने माओवादी नेताको भनाई एमाले नेताहरु ठाडै अस्वीकार गर्छन ।
आलोपालोको आधारमा सरकार संचालन गर्ने सहमति नभएको एमाले नेताले दावी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वय् खण्डन गर्छन् । भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले एमाले र माओवादीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको दावी गरे ।
बाम गठबन्धनका मुख्य घटक माओवादी अध्यक्ष दाहालले नै सहमति भएको दावी गरेपछि एमाले नेताको तर्क फिक्का भएको छ । एमालेका शीर्ष नेताले भने यो विषयमा मुख खोलेका छैनन् । त्यसैले आलोपालोको आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा एमाले–माओवादीबीच सहमति भएको थियो या थिएन भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, विगतको राजनीतिक संस्कार हेर्ने हो भने एमाले–माओवादीबीच सहमति भएको छैन भन्न पनि सकिन्न । एमाले–माओवादी यतिखेर पार्टी एकताको प्रकृयामा छन् । यस्तो अवस्थामा आगामी सरकारको नेतृत्व कसले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुनुले एमाले–माओवादी एकतामै समस्या उत्पन्न हुने आशंका हुन थालेको छ ।
– news24nepal बाट
ओली प्रधानमन्त्री हुने दिन सार्वजनीक ! कहीले हुँदैछन ? अब जम्मा यती दिन बाँकी